Umtya wokuThintela i-Coil wokufaka isitampu ngokuzenzekelayo China Manufacturer
Inkcazo:Cofa kwizixhobo zokondla,Cinezela kwigumbi lokusebenzela,Inkqubo yokuNcitshiswa koMgaqo weCoil
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > Umtya wokuThintela i-Coil wokufaka isitampu ngokuzenzekelayo
Umtya wokuThintela i-Coil wokufaka isitampu ngokuzenzekelayo
ICOIL F EEDING LI NE YOKUQHUTYWA KOKUGQIBELA
Lo mtya wokuKhambisa i-Coil wokugcina isitampu sokugcina indawo uhlanganisa idibanisa / i-straightener kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho ngokuthelekiswa ne-loops eqhelekileyo yeslayidi. Sinikezela ngeempawu ezininzi ezinokukhethwa ukuze zilungele iimfuno ezithile zesicelo, kubandakanywa ii-peelers, ukubamba iingalo, okanye ukuhlangulwa komqhubi. Le nkqubo yenzelwe iitreythi ezingama-0.6-6.0mm ubukhulu kunye nezixhobo ezinamandla ezomeleleyo ezifuna ukuqhutywa kwisimo esichanekileyo. Ngokuqulunqa loop ngezantsi kwesiporho kunye nokufaka feeder kunye ngqo, indawo ebalulekileyo emgangathweni igcinwe. Ukukhutshwa kweenqwelomoya zokondliwa kokubini kunye nokuqengqeleka ngqo, kuya kwenza uyilo olululo kwizicelo zokufa eziqhubekayo.
Ikhoyili Ukondla Ilayini kuluhlu auto sokunyathela uzaziyo straighteners eqhelekileyo ukuba kokuyeka kuguqa le lale kwakunye levellers for ephakamileyo straighteners imfuneko Ukolulwa ngqo kunye rolls eqondisa khaxa ukuba ephezulu imfuneko umgangatho eqondisa. Owona mgangatho uphezulu wokusebenza ubanzi, ngokuxhomekeka kuhlobo lwe-strighener, umalunga ne-1800 mm.
Ezona Nxalenye ziphambili zeNkcaso yokuTya i-Coil yokufaka isitampu ngokuzenzekelayo njengezantsi:
I-MAC4 Coil Feeding Line yokuhambisa isitampu ngokuzenzekelayo isebenza kumzi mveliso wabathengi bethu.
Umtya okondla i-Coil wokufaka isitampu ngokuzenzekelayo kuku f okanye ukwenza umgca wokutya we-bracket coil sheet.
Lo matshini usebenza esebenzela omnye umzi-mveliso wabathengi bethu, bavelisa indawo zohlobo olu-U kunye noMnxeba woKondla i-Coil wokufaka isitampu ngokuzenzekelayo.
Cofa kwizixhobo zokondla Cinezela kwigumbi lokusebenzela Inkqubo yokuNcitshiswa koMgaqo weCoil Cofa kwiinkqubo zokondla Cofa kwindawo yokondla Izixhobo zokondla i-PA Cinezela izixhobo zeMondli Izixhobo zeServo zoKondla